Cable zvishongedzo Vagadziri & vanotengesa - China Cable zvishongedzo fekitori
HBLQ 12KV-17/50, 24KV-34/78 Yemaitiro eEuropean Anobata Anosvikika Rear Arrester
15/45 (50), 34/78 yeEuropean-dhiraini inobatika inobatika vanosunga vanogona kupa yakavimbika overvoltage dziviriro yemagetsi masystem. Iyo yekunze semiconducting laye, yeye yakadzivirirwa yekumashure yekusunga inovimbisa yega kuchengetedzeka kwevekugadza uye vekuchengetedza vashandi uye. Je uperation yemidziyo. Panguva imwecheteyo, ayo akasarudzika masisitimu eanti-ultraviolet, anti-kuchembera, wate-hum unyoro-humbowo hunovimbisa kumhanya uye kuvimbika kwezvigadzirwa munzvimbo dzakaomarara .. Iyo yeEuropean-dhizaini ...
Iyo PT gokora remhando yemubatanidzwa inoshandiswa kune yakazara insulated, yakazara inodzivirirwa uye yakanyatso kusunganidzwa kubatana kweiyo yepamusoro voltage divi reJDZ12A-10R transformer (sekushandisa simba rekupa kana kudzivirira metering kwemagetsi mashandiro mashandiro). Iyo inokodzera tambo yekuyambuka-zvikamu 35-120mm2. Iyo yakazara insured, yakadzivirirwa zvakakwana uye yakazara chisimbiso chigadzirwa, iyo plug-in yekubatanidza iri nyore kwazvo, uye ine yakavimbika inorwisa-kusunungura chishandiso. Iyo yakakodzera 15kV polyethylene tambo ine muchinjiko-chikamu ...
JBK 12 / 24KV-630A European Style Inobatika Inosvikika Yekuseri Yekubatanidza
Kunyorera * Iyo 63OA Europe; n rea chinongedzo chinobatanidzwa neEuropean pamberi mubatanidzwa kana imwe yekumashure yekubatanidza kuti ipe yakawedzera cb 、 le co 'nection wedunhu (bazi). Iyo haina kuve yakanangana zvakananga nechigaro chehushe uye rusvingo bushing: magumo ayo masendimita 'ive di cctly yakavharirwa neyakavhara plug. Iyo inogona zvakare kuwedzeredzwa kuti ibatanidze imwe yeEuropean-dhizaini kumashure chinongedzo kana kumashure-kusunga. * Inokodzera kuiswa mukati nekunze. * Rated voltage: 8.7 / 15kV, 18 / 24kV * Inoenderera mberi ra ...
JB 12 / 24KV-630A Yemaitiro eEuropean Anogunzva Inotsemuka Yemberi Joint
Kunyorera * Unganidza imwechete-chikamu 厂, th ee- 上 haisi tambo dzakadzivirirwa kune magemura, switchgears, mabhokisi ebazi nemimwe michina kuburikidza ne (30A yakagadziriswa mabhatani. * Inokodzera: 、 d 『m nekuiswa kwekunze. * Rated vc tabe: 8.7 / 15kV, 18 / 24kV * Inoenderera mberi yakatarwa parizvino 630A; (900A kuwanda kunogona kugara kwemaawa masere) * Inowedzerwa (JBK) yekumashure yekubatanidza kana (HBLQ) yakateedzana inosunga kuti isvike kuwanda-chiteshi kuiswa kana kupa yekuwedzeredza dziviriro. * Tambo hunhu: - Mhangura ...
Iyo 12 / 24kV 630A inodzivirira cap ndeye chishongedzo cheiyo mhenyu bhazi ling, h inopa chifukidziro chekuvharira cheiyo mhenyu bushing uye isina ivhu uye hunyoro-chiratidzo chevhavha kune isingazivikanwe majoini. Iyo 63 OA inodzivirira cap inogona kuiswa pane 630A bu ， Lngs, susbars uye madziro akarembera michina. Kana iyo barbar uye tambo majoini akachengeterwa nzvimbo dzekutengesa, iyo v mu t ichavharwa ne630A inodzivirira makapu. Type Tsananguro Pluo ict Maumbirwo 1. Mashandiro mhete: yakagadzirwa nesimbi yakakosha simbi, iri nyore ...
DZJT 12 / 24KV-630A / 1250A yeEuropean Dhizaini Inogunzika Inotsemuka T-Chinobatanidza
Tc .ector inokodzera Qr ABB, Siemens, S (uye mamwe marangi; kumusoro kana pasi kwerin'i network kabati switch ndeye Elly yakavharirwa uye Elly seacrc arc mhando mbiri, yakadzivirirwa uye isina kuvharwa. uye zvakare yakatsvuka il anch mabhokisi ane switch. Yakazara yakavharwa uye yakazara insured kubatana kunoonekwa Qr iyo mutoro switch. 尸 zvakanyanya inodzivirira kukanganisa kwe tai kunokonzerwa neakanyanya magetsi ekuratidzira mune yakaipa mamiriro ekunze. Mhete ncWork cabMct p gungwa reTc .cctor uye ...
SZJT 12 / 24KV-630A / 1250A European Style Inobatika Inogoneka + -Connector
Iyo + -connector inokodzera AB r ABB, Nokia, S hneii er nezvimwe zvigadzirwa; iyo yekumusoro kana yepasi pein'i network network kabhodhi switch yakangodzivirirwa, d Elly gungwa: 丄 r'ere mhando mbiri, dzakadzivirirwa uye dzisina kuvharwa. Inowirirana neyakajairika socket yemutoro switch uye zvakare yakatsvuka il-anch mabhokisi ane switch. Yakazara yakavharidzirwa uye yakazara insured kubatana kunoitika - ir mutoro chinja. □ inonzvenga inodzivirira iyo ^ hurema hunokonzerwa nekukwirisa kwemagetsi mumamiriro ekunze akaipa. Mhete negork cabinet: Fp 、 ...
MX 12 / 24KV-630A / 1250A Yerudzi rweEurope Inogona Kubatika Inoparadzaniswa Busbar
General Busbar system c, inoshandiswa pakati pe12kV GIS switL, nzeve-dzinde, kubatanidza bhazi kweiyo yepakati nzvimbo chinhambwe che280mm, inokodzera maximum 山 e yakakwira cunent 63) A, 1? 50A. Iyo yepamusoro busbar system inoshandisa bhaudhi crimping chimiro, uye inochinjika kubatana haina kunetsekana t. Iyo bharbar inosanganiswa neiyo 63. \_ + -C 、 rector uye T-connector. Iyo yakaiswa pane panosangana switch uye inogona kuona se ”es kubatana kwemazhinji qad switch.